Ny tenin’ny kandida Hery Rajaonarimampianina
Mpahay toe-karena sy « expert-comptable », Hery Rajaonarimampianina dia teraka ny 6 Novambra 1958. Manambady an’i Voahangy Rajaonarimampianina ary raim-pianakaviana manan-janaka dimy.
Rehefa nahazo ny « Maîtrise en Sciences Economiques » tao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, dia nanohy ny fianarana ambaratonga ambony dingana fahatelo. Tamin’ny 1986, nahazo ny DEA momba ny comptabilité tao amin’ny Université de Trois-Rivières (Québec, Canada), ary ny diplaoma « Expert-comptable » voamarin’ny General Accountant’s Association ao Canada tamin’ny 1991.
Nony tafaverina an-tanindrazana, nanao ny asa maha-expert-comptable sady nampianatra tao amin’ny INSCAE ka nitazona ny toeran’ny tale ny taona 1991 ka hatramin’ny 1995 izy. Mpampianatra tao amin’ny oniversiten’Antananarivo sy tao amin’ny IAE ao Metz koa izy.
Tamin’ny 1995 dia nanorina ny « Auditeurs Associés C.G.A », izay nanana ny lazany eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara. Hery Rajaonarimampianina dia nitazona ny toeran’ny filoha nasionalin’ny Holafitry ny Experts Comptables de Madagascar ny taona 2003 ka hatramin’ny 2008.Tamin’ny 2004, filoha lefitry ny Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) izy talohan’ny nanendrena azy ho mpanolotsain’ny Comité National pour la Sauvegarde de l’Intégrité.
Tamin’ny 2009, voatendry ho Minisitra misahana ny Ministeran’ny Vola sy ny Tetibola, andraikitra notazoniny tao anatina toe-draharaha tena sarotra noho ny fahatapahan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Madagasikara sy ireo mpiara-miasa mahazatra. Vitany anefa ny tsy nampiakatra ny vidim-piainana ary tsy nampiovaova ny sandan’ ny ariary amin’ny fanajana tanteraka ny faneken’ny fanjakana.
Ny volana Aogositra 2013, dia nanambara ny filatsahan-ko fidiana filoham-pirenena ny desambra 2013 amin’ny alalan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara izy. Lany ho filoham-pirenena araky ny nambaran’ny CES ny 17 janoary 2014 ary tamin’izany no nahazoany ny salan’isam-bato 53,50%.
Amin’ny fahalaniany ho filoham-pirenena, ny tarigetrany dia ny hamerina ny Malagasy rehetra hiraha-honina anaty filaminana, hiasa ho an’ny fampihavanam-pirenena ary hametraka paik’ady hampivoarana ny toe-karena sy ny tontolon’ny asa, ny fitsinjaram-pahefana, ary ny ady amin’ny fahantrana sy fanohanana ny tanora.
Noraisin’ireo mitovy laharana aminy ankaravoana tamin’ny fihaonana an-tampon’ny faharoa amby roampolon’ny Vondrona Afrikanina tao Addis-Abeba ny 30 janoary 2014 ny tenany, fotoana nanamarika ny fiverenan’i Madagasikara ao anaty ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Notanterahina teto Antananarivo ny fihaonana teo amin’ny COMESA tamin’ny Oktobra 2016 ary ny Vondron’ny tany miteny frantsay amin’ny ampahany na manontolo antsoina hoe OIF tamin’ny Novambra 2016 ka ireo dia nitory ny herin’i Madagasikara eo anivon’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena.
Ny vinany ho an’ny firenena dia voafintiny amin’ny fiteny famerimberiny manao hoe :
« Madagasikara dia nosin’ny fanararaotana vaovao ».
Fampahafantarana an’i Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Voahangy Rajaonarimampianina dia nosalorana ny anarana Vehivavy voalohan’i Repoblikan’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny fametrahana ny vadiny ho filoham-pirenena, ary tsy nitsahatra ny nampiakatra ny lanjan’ny vehivavy izy, indrindra fa amin’ny fanomezana azy ireo fahalalahana hampiasa vola eo amin’ny sehatry ny toe-karena.